आज पुत्रदा एकादशी, व्रत बस्दा हुन्छ यस्तो फाइदा ! -
July 30, 2020 अखवार अनलाइनLeaveaComment on आज पुत्रदा एकादशी, व्रत बस्दा हुन्छ यस्तो फाइदा !
पुत्रदा एकादशीको व्रत वर्षमा दुइ पटक पर्छ । साउन र पुस शुक्लपक्षको एकादशीमा पुत्रदा एकादशी मनाइन्छ। पौष महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई पौष पुत्रदा एकादशी भनिन्छ भने श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशीलाई श्रावण पुत्रदा एकादशी भनिन्छ ।
पद्म पुराणका अनुसार सांसारिक सुख प्राप्ति तथा पुत्र लाभका लागि पुत्रदा एकादशी व्रत फलदायी मानिन्छ । सन्तानहीन या पुत्रहीन मानिसहरुले यो व्रत लिनाले फल प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ ।
धर्मशास्त्रहरु अनुसार प्राचिनकालमा भद्रावतीपुरी नगरमा राजा सुकेतुमानले राज्य गर्दै आएका थिए । तर ती राजाका सन्तान भने थिएनन् । राजा निसन्तान भएका कारण राजपरिवारमा चिन्ता थपिएको थियो ।
राजा सुकेतुमानका पिता समेत राजकाजको जिम्मेवारी सुम्पने उत्तराधिकारी नभएका कारण चिन्तित बन्दै गएका थिए ।दिन बित्दै जाँदा एकदिन राजा सुकेतुमान घोडा चढि जंगल डुल्दै जाने क्रममा घना जंगलभित्र पुगे । जंगलको धेरै भित्र पुगेका कारण उनलाई थकाई र तिर्खा लागेको थियो ।
पानीको खोजीमा उनी झनझन जंगलभित्र पुगे । निकै पर उनले पानीको सरोवर देखे तर त्यहाँ ऋषिमूनिहरु आश्रम बनाई वेदपाठ गर्दै बसेका थिए । घोडाबाट उत्रिएर राजा सुकेतुमानले सरोवरको पानी पिएपछि ऋषिमूनिहरुलाई नमस्कार गरे ।
राजाले सरोवरमा एकत्रित भएर बस्नुको कारणबारे ऋषिमूनिहरुसंग सोधे । ऋषिमूनिहरुले पनि पुत्रदा एकादशी आउन लागेकाले स्नानका लागि भेला भएको जवाफ दिए । राजाले पुत्रदा एकादशीको व्रतबारे ऋषिमूनिहरुसंग जिज्ञासा राख्दा ऋषिमूनिहरुले पुत्र तथा सन्तान प्राप्तिका लागि यस एकादशीको व्रत अनिवार्य भएको बताए ।
राजाले पनि सवै विधि पुरा गरी पुत्रदा एकादशीको व्रत बसे । फलस्वरुप उनलाई पुत्र प्राप्ति भएको पौराणिक कथा छ । सोही अनुरुप आज पनि पुत्रदा एकादशी व्रतको महात्मे महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
यस एकादशीको व्रत बस्नका लागि अघिल्लो दिन अर्थात दशमीकै दिनदेखि लसुन प्याज तथा मांसाहारी भोजन त्याग्नु पर्दछ । एकादशीका दिन बिहानै उठेर स्नान गरी शुद्ध भई व्रत बस्नु पर्दछ ।
यस दिन भगवान बिष्णुको बालगोपाल रुपको पूजा गर्ने गरिन्छ । बालगोपाल बिष्णुको प्रतिमा स्थापना गरी पञ्मामृतले स्नान गराई धुप दिप नैवेद्य सहितले पूजा गरिन्छ भने नरिवल, पान, सुपारी, ल्वाँङ जस्ता प्राकृतिक फलफूलहरु चढाइन्छ ।
एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशीका दिन बिष्णुलाई अर्ध्य दिएर व्रत र पूजा समापन गरिन्छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत थप ९ जनामा कोरोनाको संक्रमण
विहिबार तपाइको लागि कति शुभ छ हेर्नुहोस राशिफल (२०७६ बैशाख १२ गते)
April 25, 2019 April 26, 2019 अखवार अनलाइन
May 25, 2020 अखवार अनलाइन
चैत्र ६ गते बिहिबारको राशिफल, कस्तो छ तपाइको आजको भाग्य ?
March 19, 2020 अखवार अनलाइन
आजको राशिफल / वि.सं. २०७५ पौष ०५ गते बिहीबार
July 13, 2020 July 13, 2020 अखवार अनलाइन